vendredi, 17 avril 2020 17:12
Antananarivo Renivohitra: 45 270 ny zokiolona hizarana aro-vava mandritra ny fotoana fizarana fisotroan-dronono
Nizarana aro-vava maimaipoana ireo zokiolona mandray fisotroan-dronono izay nomen'ny teo anivon'ny Minisiteran'ny Mponina notarihan'i minisitra Naharimamy Irmah Lucien. Teo Antaninarenina, izay toerana ahitana mpandray fisotroan-dronono maro indrindra no nisantarana ny fizarana, ary nitohy teo amin'ny ministeran'ny teti-pivoarana Anosy. Manodidina ny 45 270 ny zokiolona hizarana cache bouche mandritra ity fotoana fizarana fisotroan-dronono ity eto Antananarivo Renivohitra. Notolorana cache bouche sy baume fosa ireo zokiolona teo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 15 avril 2020 21:59
Akoor – Digue: Nizara aro-vava maimaimpoana ho an’ireo tonga niantsena tao
Mitondra anjara birikiny amin’ny fisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19 ny tranombarotra Akoor-Digue eny Andohatapenaka – Antananarivo. Tolorany aro-vava maimaimpoana ireo rehetra tonga niantsena tao androany alarobia 15 aprily. Hitohy amin’ny 17 aprily ny hetsika. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 15 avril 2020 21:11
Toamasina: Mirotsaka an-tsehatra tsy miato ny Governoram-paritra
Tena an-tsehatra hatrany androany alarobia 15 aprily ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore. Tao anatin'ny programany androany, niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ny: - Fizaràna ny VATSIN'ANKOHONANA tany Antetezambaro,- Andro farany fanomanana ny VATSY TSINJO andiany faharoa, tao amin'ny Gymnase SOAVITA,- Fizaràna arotava sy fanentanana nandritra ny TSENA MORA, CEG Radama. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 14 avril 2020 18:25
« Panier santé »: Nisitraka ny fanomezana ireo Sojabe sy beantitra tao Mandritsara sy Befandriana
Notoloran’ny Faritra Sofia « Panier santé » ahitana karazan-tsavony fidiovana samihafa ireo Sojabe sy beantitra tao Mandritsara sy Befandriana. Hitohy any Bealanana sy Analalava ny fanampiana. Nohamafisin’ny Governoram-paritra tamin’ireo Ray aman-dreny kitapo nifonosona izay Sokajin’olona mora andairan’ny valanaretina Covid-19 ny zokiolona ka izay no isan’ny anton’izao fanampiana izao, hoy ny Governoran’i Sofia, Lylison René de Rolland sy nanaovany fanentanana mba hitandremana satria zava-dehibe ny fahasalamana. Hisy koa fampitaovana « kit Bio-Lite » na herinaratra miampy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, avy amin’ny "Baobab+", natolotry ny Faritra hamahana ny olana sedrain'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpitandro ny filaminana manao ny asany amin'ireo « barrage sanitaire » amin’ireo Distrika fito (Analalava, Antsohihy, Bealanana, Befandriana Avaratra, Boriziny, Mampikony ary Mandritsara) ao anatin’ny Faritra Sofia. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 14 avril 2020 18:09
Melvin Adrien: Nanolotra aro-vava 5 hetsy isa hiadiana amin’ny fihanaky ny Coronavirus
« On est ensemble, Je suis avec vous ». Tamin’ny alalan’io fehezanteny io no nanehoan’i Melvin Adrien, mpiandry tsatokazo tompontoerana ao amin’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na Barea an’i Madagasikara, ny fiaraha-mientany amin’ny Malagasy amin’ny fiatrehana ny Coronavirus. Aro-vava vita eto an-toerana, miisa dimy hetsy ny anjara biriky entiny. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 13 avril 2020 10:56
Fianarantsoa: Hanomboka anio ny fizarana ny fanampiana ho an’ireo mponina marefo eny anivon'ny Fokontany
Notanterahina ny Alahady 12 aprily 2020, andro Paka, tao amin'ny gymnase Ambatomena ny fanomanana sy fikarakarana ny « Vatsy Tsinjo » ho an’ireo mponina marefo eny anivon'ny Fokontany eto Fianarantsoa, iray amin’ireo tanàna mampihatra ny fihibohana hisorohana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus. Mifarimbona amin’ny fitantanana izany miaraka amin’ny Governoran’i Mahatsiatra Ambony, Razafindrafito Paupil ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah sy ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy fandrosoana lovainjafy Vahinala Baomiavotse Raharinirina. Hanomboka anio maraina ny fizarana ireo fonosana « Vatsy Tsinjo » efa vita, hanampina ny tokantranon'ireo mponina marefo eny anivon'ny Fokontany. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 12 avril 2020 14:16
Sary: Association Fitia
EPP d’Ambatobe: Nifanome tanana ny tanora nitondra fanavaozana
Nolokoina ny trano, novolena voninkazo sy zavamaniry fihinana ny zaridaina. Andian-tanora no nifanome tanana tamin’izao herinandro masina izao, nitondra anjara biriky amin’ny fanatsarana ny tontolo hovantanin’ny mpianatra ao amin’ny EPP Ambatobe, Antananarivo aorian’izao fiatoana noho ny fisian’ny valanaretina Coronavirus izao. Isan’ireo nandray anjara tamin’izao tolotanana izao ny zanaky ny filoha Andry Rajoelina. (Sary: Association Fitia) (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 11 avril 2020 11:09
Lutte contre le coronavirus: Contribution des hommes d’affaires locaux et étrangers
Des hommes d’affaires locaux et étrangers sont venus prêter main-forte aux autorités malagasy dans la lutte contre le Coronavirus. Il en était ainsi de l’opérateur économique et médecin, le Dr Vikram Patel, qui a remis des dons auprès du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) Ivato, le 10 avril 2020. Il a offert cinq tonnes de riz, une tonne de sel ainsi que 1000 masques de protection de production locale à cette occasion. (Voir Suite Photo)
samedi, 11 avril 2020 09:51
Kaominina Antananarivo Renivohitra: Nanampy ireo voafonja tsy ampy taona sy ireo taizan’ny Akany Avoko Faravohitra
Nanolotra fanampiana ireo voafonja tsy ampy taona teny Antanimora sy teny amin'ny Akany Avoko Faravohitra ny Kaominina Antananarivo Renivohitra manoloana ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena amin'ny ady amin'ny valanaretina Coronavirus ary amin'izao ankatoky ny fetin’ny Paka izao. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 10 avril 2020 16:10
COVID-19: Facebook lance le Centre d'information sur le coronavirus dans 17 pays africains
Les utilisateurs de Facebook peuvent choisir de s’abonner au Centre pour recevoir des notifications et voir dans leur fil d'actualité les mises à jour des autorités sanitaires officielles Le Centre, déjà lancé en Afrique du Sud la semaine dernière, va maintenant être étendu à plus d’une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne, dont notamment: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la Côte d'Ivoire, l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, les Seychelles, la République démocratique du Congo (RDC) et le Togo.